Bestlọ oriri na ọ Thaiụ Bestụ kacha mma Thai - Nri
5lọ oriri na ọ Thaiụ Thaiụ Thai kacha mma na Miami
5 Best Thai Restaurants Miami
Kedu ihe na-agaghị amasị nri Thai? Ọ bụ ọkụ, dị ọhụrụ ma jupụta na ekpomeekpo. Oge ọzọ ị na-achọ nnukwu efere nke mmanya na-egbu egbu ma ọ bụ nku ọkụkọ na-acha ọkụ ọkụ, ụlọ nri ise a ka ị kpuchie.
Njikọ: 9 Reslọ oriri na ọ Newụ Newụ ọhụrụ (ish) nke Miami anyị hụrụ n'anya ugbu a
Site n'ikike nke Sawaddee Thai & Sushi
Anyị niile bụ maka ụlọ oriri na ọ secretụ secretụ nzuzo, karịsịa mgbe ụgwọ ọrụ nke ịchọta ya gụnyere ọkụkọ ọkụ ọkụ (nke a na-eghe eghe eghe n'ime anụ ụlọ chili). Sawaddee zoro n'ime ụlọ ahịa warara nkịtị, ebe Thai kacha nwee ọmarịcha ahịhịa na azụ na obodo. Ọ bụkwa otu n'ime ụlọ oriri na ọ Bụ inụ BYOB dị n'ógbè ahụ na-anaghị akwụ ụgwọ ego mkpuchi. Were ya ka mmeri-mmeri.
6968 Bay Dr., Miami Beach; 305-866-8111 ma ọ bụ sawaddeethaisushi.com
Site n'ikike nke Naiyara
Mgbe tagline nke ụlọ oriri na ọ isụ isụ bụ Sexy Sushi Thai, ị maara na iri nri gị ga-abụ ihe ọ bụla mana nkịtị. Onye siri nri Piyarat Potha Arreeratn (aka Chef Bee) na-etinye oge a na nri Thai, na-eje ozi nku ọkụkọ kimchi na Wagyu beef dumplings na mkpụrụ mmanya na mkpụrụ osisi. Ka anyị kwuo na ọ bara uru ịpụpụ ikiri ụkwụ gị maka nke a.
1854 Bay Rd., Miami Beach; 786-275-6005 ma ọ bụ naiyara.com
Site n'ikike nke Cake Thai
Ọ bụrụ na ị jụọ mmadụ ụlọ oriri na ọ Thaiụ Thaiụ kacha amasị ha na Miami, ọ ga-abụ na ha ga-ebu ụzọ kpọọ aha Cake Thai. Na ọnọdụ dị na agbata obi MiMo nke Miami, na Lincoln Eatery na Miami Beach na n'ime 1-800-Lucky na Wynwood, ọ bụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụghị adaba. Ebe ọ bụla ị gara, ị ga-achọ ịbịa agụụ wee gbalịa ọtụtụ menu dị ka o kwere mee, gụnyere pineapple eghe osikapa, cashew nut chicken na obere mkpirisi curry. Ndụmọdụ: Jụọ maka nri chili ọzọ.
7919 Biscayne Blvd., Miami; 786-534-7906 ma ọ bụ cakethaikitchen.com
Hapụ ya na Miami ka ị nwee ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ nke na-elekọta Thai tapas na Little Havana, nke ebe niile. Ma nke ahụ bụ ihe Lung Yai na-eme, na n'eziokwu, anyị amaghị ihe anyị ga-eme na-enweghị tofu ya na-acha ọkụ ọkụ, nke ọkụkọ eghe eghe na Thai. agụụ ogwu (akwa noodles na curry ọla edo na coriander na uhie uhie). N'ihi ya, kwesịrị mbanye.
1731 SW Eth St., Miami; 786-334-6262 ma obu lung-yai-thai-tapas.com
Site n'ikike nke Moon Thai
Ebe asaa dị gburugburu obodo ahụ - gụnyere Coral Gables, Kendall na Aventura — Ọnwa Thai maara nke ọma ihe ọ ga - ewe iji sie nri Thai dị mma. Tom yum ite oku, aki oyibo, mango salad na pad ke mow (ọ bụ ihe ọ dụ dụ na-egbu anyị ka anyị na-a withụbiga mmanya na broccoli na ose). Yep, anyị niile na-aga ebe a.
Ọnọdụ dị iche iche; moonthai.com
Njikọ: 8 Akwa Ebe maka Weekday Lunch na Miami
oké ịhụnanya akụkọ fim
chịkwaa ntutu ịda ma regrowth
ndepụta nke 2017 nkịta fim
okomoko ụlọ nkwari akụ ụlọ oyiyi